Deni oo qiray in Puntland ay yaalaan Makiinado lacagta lagu sameeyo | KEYDMEDIA ONLINE
Deni oo qiray in Puntland ay yaalaan Makiinado lacagta lagu sameeyo
Deni ayaa tilmaamay in lacagta markii lasoo daabaco lagu duugu dhulka si looga dhigo mid u muuq eg lacag hore ama duug ah.
Madaxweynaha Maamulka Puntland, Saciid C/laahi Deni ayaa sheegay in deegaannada Puntland ay yaalaan makiinado lagu sameeyo lacagta shilinka Soomaaliga, weliba ay gacanta ku hayaan rag ganacsato ah.
Waxa uu sheegay isaga oo la hadlayey qaar ka mid ah ganacsatada Puntland, in waxyaabaha sicir bararka keenay ay qeyb ka tahay lacagtaas lagu soo daabaco sida sharci darada ah.
"Waan wada ognahay, Illaa Afar Makiinad oo lacagaha lagu sameeyo ayaa yaala Puntland, dadku waxay ku leeyihiin lacagtaan maba cusba, sababta ayaa ah in lacagta markii la sameeyo ciid lagu rogo si ay ugu ekaato lacag hore" ayuu yiri Deni.
Dhanka kale, Deni ayaa ugu baaqay Bangiyada iyo xawilaadaha in ay sameystaan qeyb sarifka lacagaha ah, si looga maarmo ganacsatada lacagaha sarifa ee xilliga ay doonaan lacagaha hoos u dhiga ama kor u kiciya.
Sicir-barar xoog leh ayaa wuxuu ka jiraa deegaanada Maamulka Puntland kaasoo saameyn xooggan u geystay bulshada ku dhaqan halkaas, iyadoo maanta ciidanka Puntland bilaabi doonaan howlgal ku saabsan iney soo xirr-xiraan dhammaan ganacsatada diida iney goobahooda furaan.